Takapinda 2020 ISE, Netherlands
2020 ISE yakaitirwa muAmsterdam kubva munaFebruary 11 kusvika 14. Sezvo chainyanya kuratidzira muEurope kwema audio-visual Equipment pamwe neruzivo nzira yekubatanidza tekinoroji (pano inonzi ISE), Parizvino, ndiyo inonyanya kubudirira uye yakakura indasitiri yeindasitiri- kuratidzwa kwakawanda muEurope.
ISE chiratidziro chegore negore, icho chinoitwa neInfocomm yepasi rose, kuRAI Amsterdam, Netherlands.
Kambani yedu yakaratidzira LCD yekunyora bhodhi ine zvinhu zvitsva, chikamu chidimbu uye kutumira & basa rekuchengetedza, vazhinji vanodzikisira vaitaura zvakanyanya zvigadzirwa zvedu, izvo zvakare zvakakwevera varatidziri vakawanda vakaita All-In-One Touch Screens kuona uye kutaurirana kushandira pamwe.
Iyo ye77th Education Equipment Exhibition muQingdao
Abstract: Iyo 77th Educational Equipment Exhibition yakaitirwa kuQingdao International Exhibition Center musi wa12, Gumiguru, 2019. Chitsva chigadzirwa LCD bhodhi, smart kirasi mhinduro uye All-in-one PC yakwezva akawanda maindasitiri nyanzvi.
Zvinozivikanwa kuti China Dzidzo Yezviratidziro Exhibition ndiyo hombe chikuva chekuratidzira uye kutaurirana, uye beacon yemusika futi. LONBEST LCD dhiibhodhi yakawana mutsva mutsva nekukosha kwayo imwe, kudzima chikamu, kuenderana kutapurirana uye nekuchengetedza mabasa. Icho chigadzirwa chitsva chakawanikwazve kutaridzirwa nevanozvigovera, vadzidzisi, vabereki uye nyanzvi dzemaindasitiri edzidzo.
LONBEST LCD Blackboard yakaratidzwa kuWorld DIDAC ASIA
Pa Gumiguru 9-11, 2019, Nyika DIDAC Asia inotambirwa muBangkok, Thailand. Mumakore gumi apfuura, kuratidzira uku kwakawedzera kuva chiratidzo chedzidziso yekubatsira indasitiri muSoutheast Asia. Iyo inozivikanwa kune avo vateereri vehunyanzvi uye mhando yepamusoro. Iyo ine mukurumbira wakanaka kwazvo pakati pevaratidziri veChinese. Chiratidziro chinoitwa gore rega uye chinonyanya kukosha chikuva chemabhizinesi ekuvhura musika weThai.
Takasvika pachibvumirano chekudyidzana nemumwe wedu - Starcast, kuronga pamwe chete uye kuenda kuchiratidziro, tichitarisisa LCD bhodhi, kugadzira chirongwa chekudzidzisa chakangwara. Yakakwezva vatungamiriri vezvikoro nevazhinji vadzidzisi kuti vazvione. Yayo isina guruva uye yakasarudzika kuchengetedza pfungwa yehutano, kuchengetedza yekutanga yekunyora chiitiko, yakafarirwa kwazvo nevatungamiriri uye nevadzidzisi, uye yakapa akawanda mazano anovaka.
Uye isu zvakare takwezva varatidziri kubva kuFrance, South Korea neSpain, avo vakataurawo zvikuru zvigadzirwa zvedu. Pakati pavo, varatidziri veFrance neSouth Korea vakataura zvakajeka kuti vaizoratidza zvigadzirwa zvedu kuFrance yekuratidzira michina yekudzidzisa mwedzi unouya, uye vakatanga kusvika pakubatana.
Dzidzo IT Solutions Expo, EDIX, Tokyo
Dzidzo IT Solutions Expo yakaitwa muna Chikumi 19-21, 2019, muTokyo, EDIX ndiyo yakanyanya uye ine mukurumbira kuratidzira kwezvishandiso zvedzidzo muJapan, iwo mukana wakanaka kwazvo wekusimudzira kutaurirana nekudyidzana, kuunza zvigadzirwa zvitsva nebasa. .
Isu takakokwa kuenda kunoratidzwa iyi, uye takaratidza zvigadzirwa zvedu zvitsva - LCD yekunyora bhodhi, izvo zvitsva zvinhu: guruva-risina, peni, rakasvibirira uye rakachena, maziso ane hanya, eco-ane hushamwari, nezvimwewo .. Inofarirwa nevazhinji. vatengi.
Vazhinji vagovera vanofarira kwazvo muLCD kunyorera bhodhi, vane tarisiro huru kune tarisiro yemusika.
Iyo 76th Dzidzo Yekushandisa Exhibition muChongqing
Abstract: LONBEST LCD bhodhi yakatarwa se "Iyo Goridhe Mubairo Chigadzirwa" pa76th Yekudzidzisa Zvishandiso Exhibition (26th 28th, Kubvumbi, 2019) uye yakanakidzwa mukurumbira mukuru pakati pevatengi.
Izvo zvakawanikwa nezve kusatarisira kuona kwevechiri kuyaruka neNational Health Commission zvinoratidza kuti kusaona nezvehurefu hwevechiri kuyaruka hwaive 53.6% muna 2018. Chiono nyaya yehutano yakatorwa zvakanyanya nevabereki, zvikoro uye nzanga. Mune ino kesi, "maziso ekuona" zvigadzirwa zvaive zvakakurumbira, uye LONBEST LCD bhodhi rakanyorwa pakati pavo.
Izvo hazvina kufanana neLCD inoratidza, LONBEST LCD dhiibhodhi inoshandisa isina-backlight tekinoroji kuratidza iyo ruoko rwekunyorwa nechiedza chechisikigo. Tsvina-isina, hapana radiation, hapana kudiwa kwema chaki / mamaki /, kutaridzika kwemaziso, kusarudzika kushomekana ndiko kwakanakira pane mamwe mabheji. Vanoda kusvika makumi matatu vega vekuparadzira kubva kuChina vakave vehukama veLIMBEST.
LONBEST Yakakumbirwa Kuenda Kumakumi makumi matatu Beijing Dzidzo Yekushandisa
Abstract: Yegumi nemakumi matatu Beijing Dzidzo Yekudzidzisa Zvishandiso yakaitwa zvinobudirira muNational Convention Center kubva 6th-8, Kurume, 2019.
LONBEST yakatsaurirwa pakutsvaga nekuvandudzwa kweLCD dhiibhodhi kwemakore akati wandei. Kubva pakubudirira kugadzirwa kweyechete kiyi kudzima LCD bhodhi gore rapfuura, LONBEST yakawana chikamu chekudzima basa rekuvandudza ruzivo rwekunyora. Seiyo yakasarudzika kusarudzika kusarudzika LCD dhivha pamusika wepasi rose, yakakwezva vatengi vehukama mubato reLIMBEST.